ဟဒီးဆ်: တမန်တော်မြတ် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)၏ ကိုယ်ကျင့်တရားသည် ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ပင် ဖြစ်သည်။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: တမန်တော်မြတ် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)၏ ကိုယ်ကျင့်တရားသည် ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ပင် ဖြစ်သည်။
အမျိုးအစား: အတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့် သမိုင်း။ . တမန်တော်မြတ် (ﷺ)၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ။ . တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါတော်။ . တမန်တော်မြတ်၏ ကိုယ်ကျင့်တရားများ။ .
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان خُلُقُ نَبي اللِه -صلى الله عليه وسلم- القرآن.
[صحيح] - [رواه مسلم في جملة حديثٍ طويلٍ]
အာအိရှဟ်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟာ)က ပြောကြားခဲ့သည်။ တမန်တော်မြတ် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)၏ ကိုယ်ကျင့်တရားသည် ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ပင် ဖြစ်သည်။
ဟဒီးဆ်တော်၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)သည် ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်က ညွှန်ပြထားသော အကျင့်စာရိတ္တပေါ်တွင် ရှိသူဖြစ်သည်။ ထို့ပြင်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အား ခဝပ်ကိုးကွယ်ရာ၌ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အရှင်မြတ်၏ ကျေးကျွန်တို့နှင့် ဆက်ဆံရာ၌ဖြစ်စေ ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်က အမိန့်ပေးထားသည့် ကိစ္စရပ်များကို ကျင့်သုံးတော်မူပြီး တားမြစ်ထားသည့် ကိစ္စရပ်များကိုရှောင်ကြဉ်တော်မူခဲ့သည်။ တမန်တော်မြတ်၏ ကိုယ်ကျင့်တရားသည် ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ကို သရုပ်ဖော်ပြခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဤတင်ပြချက်တွင် မုအ်မင်န်တို့၏ မိခင်မွန် အာအိရှဟ်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟာ)က မီးမောင်းထိုးပြထားသည်မှာ မုချဧကန် ကျွန်တော်တို့သည် တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)၏ ကိုယ်ကျင့်တရားများအတိုင်း အကျင့်စာရိတ္တမွေးမြူလိုလျှင် ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်အတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးရမည်ဖြစ်သည်။
ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်အတိုင်း ကိုယ်ကျင့်တရား ဆောက်တည်ခဲ့သည့် တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)အား နောက်လိုက်မှုပြုရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားသည်။
တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)၏ ကိုယ်ကျင့်တရားများကို ချီးမွမ်းထားပြီး ထိုကိုယ်ကျင့်တရားများသည် ဝဟီဗျာဒိတ်တော်၏ အလင်းရောင်မှ ပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
အစ္စလာမ်သာသနာတော်၌ ကိုယ်ကျင့်တရား၏ အဆင့်အတန်းနှင့် ပတ်သက်၍ သတိပေးထားသည်မှာ ဧကန်အမှန်ပင် မွန်မြတ်သည့် ကိုယ်ကျင့်တရားသည် ကောင်းမြတ်သော အကျင့်သီလများကို ဖြစ်ထွန်းစေသော ကလိမဟ်သောင်ဟီးဒ် “လာအိလာဟအိလ္လလ္လာဟ်”၏ တောင်းဆိုချက်များ အနက်မှပင်ဖြစ်သည်။
အတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့် သမိုင်း။ . တမန်တော်မြတ် (ﷺ)၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ။ . တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါတော်။ . တမန်တော်မြတ်၏ ကိုယ်ကျင့်တရားများ။ .
တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)သည် လူသားတို့အနက်အကျင့်စာရိတ္တ အကောင်းဆုံးဖြစ်တော်မူသည်။